ဆရာမလေး စုစုစံ ထုတ်ပြောလာတဲ့ အင်တာနက်ပေါ်က မြန်မာပြည်ကို အအေးလှိုင်း ဖြတ်မယ်ဆိုတဲ့ ဂျင်းသတင်းတွေအကြောင်း.... - ပညာ ပါဝါ
ဆရာမလေး စုစုစံ ထုတ်ပြောလာတဲ့ အင်တာနက်ပေါ်က မြန်မာပြည်ကို အအေးလှိုင်း ဖြတ်မယ်ဆိုတဲ့ ဂျင်းသတင်းတွေအကြောင်း….
Too Far | 30/12/2021 | News | No Comments
မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း အအေးလှိုင်းဖြတ်မည်ဟုဆိုတာ မဟုတ်ဘဲ လာမည့်ဖေဖော်ဝါရီလအထိ အအေးလှိုင်း (cold wave) မရှိဘဲ ပုံမှန်ရာသီဥတုမျိုးသာ ရှိမယ်လို့ မိုးလေဝသပညာရှင်မလေး စုစုစံက ပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ “၂၀၂၁ ဒီဇင်ဘာလမှ ၂၀၂၂ ဖေဖော်ဝါရီလအထိ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ပုံမှန်ရာသီဥတုကိုသာရရှိနိုင်ပါတယ်။ အအေးလှိုင်း (cold wave) မရှိပါဘူး။ ၂၀၂၂ New year နှစ်သစ်ကူးချိန်မှာ ပုံမှန်ဆောင်းထက်
အနည်းငယ်သာ ပိုအေးစေနိုင်ပြီး ၂၀၂၂ ဇန်နဝါရီနဲ့ ဖေဖော်ဝါရီလမှာ ပုံမှန်ဆောင်းကိုသာရရှိစေပါလိမ့်မယ်”လို့ မိုးလေဝသပညာရှင်မလေး စုစုစံက ပြောထားပါတယ်။ အအေးလှိုင်း (cold wave) ဆိုသည်မှာ နာရီပိုင်းအတွင်း နှင်းမုန်တိုင်းတိုက်ခတ်ခြင်းနှင့် ဆီးနှင်းများကြွေကျပြီး အပူချိန် ရုတ်တရက် ရ ဒီဂရီ စင်တီဂရိတ် အထိ ထိုးကျသွားကာ
အလွန်ထူးကဲတဲ့အအေးပိုစေတာမျိုးကို အအေးလှိုင်း (cold wave) လို့ ခေါ်တယ်လို့ ဆရာမလေးက ပြောပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း အအေးလှိုင်းဖြတ်မယ်ဆိုသည့်သတင်းများ ယခု ဒီဇင်ဘာလပထမပတ်ကနေစပြီး လူမှုကွန်ရက် စာမျက်နှာတွေပေါ်မှာ ဂျင်းသတင်းတွေ ပျံ့နှံ့ခဲ့ပါတယ်။ မိုးလေဝသနှင့် ဇလဗေဒညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနကတော့ လာနီညာဖြစ်စဉ်ပတ်သက်ပြီး ပြီးခဲ့သည့်
ရက်ပိုင်းက ထုတ်ပြန်ထားပြီး လာမည့် ၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလအတွင်း အားအသင့်အတင့်ရှိသောလာနီညာ အဆင့်မှာ ဆက်လက်တည်ရှိနိုင်ပြီး ဖေဖော်ဝါရီလနှင့် မတ်လအတွင်း အားအနည်းငယ်ရှိသည့် လာနီညာအဆင့်ကို ရောက်ရှိနိုင်ကြောင်း ထုတ်ပြန်ချက်မှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။
ဆရာမေလး စုစုစံ ထုတ္ေျပာလာတဲ့ အင္တာနက္ေပၚက ျမန္မာျပည္ကို အေအးလႈိင္း ျဖတ္မယ္ဆိုတဲ့ ဂ်င္းသတင္းေတြအေၾကာင္း….
ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း အေအးလႈိင္းျဖတ္မည္ဟုဆိုတာ မဟုတ္ဘဲ လာမည့္ေဖေဖာ္ဝါရီလအထိ အေအးလႈိင္း (cold wave) မရွိဘဲ ပုံမွန္ရာသီဥတုမ်ိဳးသာ ရွိမယ္လို႔ မိုးေလဝသပညာရွင္မေလး စုစုစံက ေျပာၾကားလိုက္ပါတယ္။ “၂၀၂၁ ဒီဇင္ဘာလမွ ၂၀၂၂ ေဖေဖာ္ဝါရီလအထိ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ပုံမွန္ရာသီဥတုကိုသာရရွိႏိုင္ပါတယ္။ အေအးလႈိင္း (cold wave) မရွိပါဘူး။ ၂၀၂၂ New year ႏွစ္သစ္ကူးခ်ိန္မွာ ပုံမွန္ေဆာင္းထက္
အနည္းငယ္သာ ပိုေအးေစႏိုင္ၿပီး ၂၀၂၂ ဇန္နဝါရီနဲ႔ ေဖေဖာ္ဝါရီလမွာ ပုံမွန္ေဆာင္းကိုသာရရွိေစပါလိမ့္မယ္”လို႔ မိုးေလဝသပညာရွင္မေလး စုစုစံက ေျပာထားပါတယ္။ အေအးလႈိင္း (cold wave) ဆိုသည္မွာ နာရီပိုင္းအတြင္း ႏွင္းမုန္တိုင္းတိုက္ခတ္ျခင္းႏွင့္ ဆီးႏွင္းမ်ားေႂကြက်ၿပီး အပူခ်ိန္ ႐ုတ္တရက္ ရ ဒီဂရီ စင္တီဂရိတ္ အထိ ထိုးက်သြားကာ
အလြန္ထူးကဲတဲ့အေအးပိုေစတာမ်ိဳးကို အေအးလႈိင္း (cold wave) လို႔ ေခၚတယ္လို႔ ဆရာမေလးက ေျပာပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း အေအးလႈိင္းျဖတ္မယ္ဆိုသည့္သတင္းမ်ား ယခု ဒီဇင္ဘာလပထမပတ္ကေနစၿပီး လူမႈကြန္ရက္ စာမ်က္ႏွာေတြေပၚမွာ ဂ်င္းသတင္းေတြ ပ်ံ႕ႏွံ႔ခဲ့ပါတယ္။ မိုးေလဝသႏွင့္ ဇလေဗဒၫႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနကေတာ့ လာနီညာျဖစ္စဥ္ပတ္သက္ၿပီး ၿပီးခဲ့သည့္
ရက္ပိုင္းက ထုတ္ျပန္ထားၿပီး လာမည့္ ၂၀၂၂ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလအတြင္း အားအသင့္အတင့္ရွိေသာလာနီညာ အဆင့္မွာ ဆက္လက္တည္ရွိႏိုင္ၿပီး ေဖေဖာ္ဝါရီလႏွင့္ မတ္လအတြင္း အားအနည္းငယ္ရွိသည့္ လာနီညာအဆင့္ကို ေရာက္ရွိႏိုင္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္မွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။
” တော်လှန်ရေးပြည်သူတွေထံသို့ လွတ်လပ်ရေးနေ့ သဝဏ်လွှာပို့ပေးသော အမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ” ( သတင်းထုတ်ပြန်ချက် )
“တသောင်းတန် အတု အစစ် အမြန် ခွဲနည်း”
မြန်မာနိုင်ငံ၏ ကားပါမစ် ဘာလဲ ဘယ်လဲ နှင့် ၂၀၂၁ ခုနှစ်ကုန်ခါနီး ကားဈေးကွက်အခြေအနေ
နေ့စဉ် လာရောက်စားသုံးသူ လူဦးရေတစ်ထောင်နီးပါးရှိတဲ့ မြောက်ဒဂုံက အဝစား ၅၀၀ ကျပ်တန် ဇလုံ ထမင်းဆိုင်
ငယ်ငယ်တုန်းက ‘A’ တန်းက အဆင့် (၁,၂,၃) ဆိုရင် ဆယ်လီဆိုပြီး သွားကြည့်ခဲ့ရတဲ့ ပညာရေးစနစ်.. ( ငယ်ငယ်တုန်းက ‘A’ တန်းက လူတွေဆို ရွှေခုံကြီးတွေမှာထိုင်၊ ရွှေမှုန်တွေစားပြီး စာသင်ရတယ်လို့ ကိုထင်မိတာ…ဟုတ်တယ်မလား)
ကျောင်းမှာ စာညံ့ခဲ့တဲ့သူတွေ လက်တွေ့ဘဝမှာ ပိုအောင်မြင်တတ်တဲ့ အကြောင်းရင်း များ ( ငယ်ငယ်တုန်းကတော့ A ခန်းမှာ မနေရရင်ကို ခွေးဖြစ်ပြီလို့ ပြောတာခံရဖူးတယ်မလား )
ဘွဲ့ရချင်ရ မရချင်နေ မူလတန်းပြ ဆရာမအဖြစ် ဆွဲခန့်ဆရာမတွေကို လစာ တသိန်းကိုးသောင်းပေးမယ်ဆိုတဲ့ မအလ အစီအစဉ် ( ပညာတတ်တာ စာသင်တတ်တာ စိတ်မဝင်စားဘူး ကျောင်းမှာ ဆရာမရှိပြီးရောဆိုတော့ တော်ကြာ လမင်းတို့ ကြယ်စင်တို့ပါ လာသင်နေအုံးမယ် )
အာရှတွင် ပြည်ပကြွေးမြီ ပြန်မဆပ်နိုင်သော နောက်ထပ်နိုင်ငံ ဖြစ်လာနိုင်ခြေ ရှိနေသည့် လာအို ( မအလ သာ ဆက်ပြီး အုပ်ချုပ်နေရင်တော့ ဒေဝါလီခံရမှာ လာအိုပြီးရင် မြန်မာ သေချာသလောက်ရှိတယ် ဘယ်လိုထင်ဆရာတို့ …)
ထိုင်းနာမည်ကြီး အပြာမင်းသမီးနဲ့ မော်ဒယ်တို့ ဘန်ကောက်မှာ စိန်ခေါ်လက်ဝှေ့ထိုးသတ်သွားဖို့ရှိ ( အပြာမင်းသမီးနဲ့ မော်ဒယ်ဆိူတော့ ပွဲကြီးပွဲကောင်းမလို့ လက်မလွတ်စေနဲ့ဂေါင်းကြီးတို့ )
ဆယ်တန်းအောင်စာရင်းကို စက်ဘီးနဲ့ လည်ရောင်းပြီး တစောင် ၅ ကျပ်နဲ့ ဝယ်ခဲ့ရတဲ့ခေတ် ( အောင်စာရင်းကို မနက်ငါးနာရီလောက် “အောင်စာရင်းတွေ” “အောင်စာရင်းတွေရပြီ” အော်ပြီး သတင်းစာပို့သမားက လှည့်ရောင်းတဲ့အချိန်တွေပေါ့.)
© 2022 ပညာ ပါဝါ.